Panthay Muslim: တရုတ်ပန်းသေး မွတ်ဆလင် သမိုင်း အကျဉ်း | Lumyo Chit
Short History of Panthay Muslim
ပန်းသေး(တရုတ်မူဆလင်) အမျိူးသားများဆင်းသက်လာပုံသမိုင်း အကျဉ်း နှင့်
လက်ရှိမြန်မာ နိုင်ငံ ပန်းသေး လူမျိူးများ၏ အခြေအနေ။
Panthay; Burmese Chinese Muslims | San Oo Aung’s Weblog
တရုတ်ပြည်တွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော လူမျိူး များကို တရုတ်လူမျိူးများဟုသိမြင်ကြ၏။ သို့ရာတွင် ထိုလူမျိူး များသည် တစ်မျိူး တစ်စားတည်းမဟုတ်ကြပေ။ တရုတ်ပြည် တွင် နေထိုင်ကြသော လူမျိူးစုကြီး ၅ စု ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့ မှာ (၁) ဟန်လူမျိူး (၂) မာန်ချူးလူမျိူး (၃) မွန်ဂို လူမျိူး (၄)ရှီစန် (ခေါ်) တိဗက် လူမျိူး (၅)ဟွေ့ ခေါ် ဟွေ့ဟွေး မူဆလင် လူမျိူး တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ တရုတ်အမျိူးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဒေါက်တာ စွန်းကျူံးဆန် တည်ထောင်သော အမျိူးသား နိုင်ငံတော် အလံမှာ ငါးရောင်ခြယ် အလံ ဖြစ်ပြီး အရောင်များမှာ -အနီ ၊ အ၀ါ၊အ ပြာ ၊ အဖြူ၊ အနက် စသည်ဖြင့် တရုတ်လူမျိူးကြီး (၅)စု ၏ အရောင် များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ယခု တရုတ်ပြည်သူ့ သမတ္တ နိုင်ငံတော်အလံတွင် ပါ ရှိသော ကြယ်နီ (၅) ပွင့် ၏ အဓိပါယ်မှာ ထို လူမျိူး ကြီး ငါးစု ကို သရုပ်ဖော်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသည် ကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် တရုတ်ပြည်ါရှိ ဟွေ့ဟွေး မူဆလင်အင်အားသည် မည်မျှ များပြား ကြောင်း ခန့်မှန်းနိုင်ပေမည်။ အစိုးရကပင် အသိအမှတ်ပြုထား ရကြောင်း မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရလေသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် တရုတ်မူဆလင်ဦးရေ သီးသန့် ကောက် ယူ ထားသည့် သန်ခေါင် စာရင်း တရားဝင် မရှိခြင်းကြောင့် တရုတ် မူဆလင် ဦးရေ အတိအကျ မသိရသော်လည်း တရုတ်ပြည်၏ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ လူကြီးများ၏ ပြောပြချက်အရ သန်းပေါင်း (၁၀၀) ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိသည် ဟု ပြောပြချက်အရ သိရပါသည်။
(မြေပုံ ကို ပူးတွဲ တင်ပြပါသည်။)
၁၉၄၃ ခုနစ် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး အတွင်း ဂျပန်တပ်များသံလွင်မြစ်အရှေုဘက်သို့ချဉ်းနင်းဝင်ရောက် လာကြ သော အခါ ပန်းလုံပန်းသေးတို့သည် ဖက်ဆစ်ဂျပန် တို့၏ သြဇာ ကိုအာခံခဲ့သောကြောင့်ဖက်ဆစ်ဂျပန် တို့၏ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှု ၊ မတရားသတ်ဖြတ်ခြင်းများ ကိုခံခဲ့ကြပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဖက်ဆစ်ဂျပန် များက ပန်းလုံမြို့ ကြီးကို မီးရှို့ ဖျတိဆီးလိုက်ပါသည်။ (ပန်းလုံ မြို့ ရှိ တစ်ခုတည်းသော ဗလီ အဆောက်အအုံတစ်ခုတည်းသာ မီးမလောင်ပဲ ယနေ့ တိုင် တည်ရှိလျှက် ရှိနေပါသည်။ ပန်းလုံမြို့ မီးလောင် ခဲ့ပြီးနောက် မြို့သူ မြို့သား များ တိမ်းရှောင်ခဲ့ရာမှ၁၉၄၀ ခုနစ်တွင် ပန်းလုံ မြို့သို့ တဖန် ပြောင်းရွေ့ နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုသို့ နေထိုင်ရာမှ လပိုင်းအတွင်းတွင် ”ကေအမ်ဒီ” ”လီပင်ဟွမ်း” ၏ တပ်ကပန်းလုံ မြို့ကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြန် သည်။ မြို့သူမြိုကသားများ ကိုတိုက်ခိုက်လုယက်ပြီး အိမ်ယာများကို ဖျက်ဆီး လိုက်ကြသည်။ ထို့ ကြောင့်ကျန် ရှိနေသေးသော မြို့သူ မြို့သား အားလုံးတို့သည် မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားသို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခဲ့ ကြသည်မှာ ယနေ့ တိုင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပန်းသေး လူမျိူး များ၏ ယနေ့ လက်ရှိ အခြေအနေ ။မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပန်းသေး လူမျိူး များ၏ ယနေ့ လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုရှုထောင့် အမျိူးမျိူး မှ လေ့လာ သုံးသပ် ကြည့်ရှုပြီး အပြုသဘောဖြင့်အကြံပြု တင်ပြလိုပါသည်။
(က) တိုင်းရင်းသား/ နိုင်ငံသားကျွနှုပ်တို့၏ ဘိုးဘွားဘီဘင်တို့ သည် မြန်မာပြည် – ပင် မွေးဖွါး -မြန်မာပြည် ပင်သေဆုံးခဲ့ကြပါသည်။ ကျွနှုပ်တို့သည်လည်း မြန်မာပြည် – ပင်မွေးဖွါး – မြန်မာပြည် – ပင် သေဆုံးခဲ့ကြ ရပါမည်။ ထို့ပြင်ကျွနှုပ်တို့၏ သားစဉ် မြေးဆက်တို့ သည်လည်း မြန်မာပြည် – ပင် မွေးဖွါး -မြန်မာပြည် – ပင် သေဆုံးကြ ရပါ လိမ့်မည်။ထို့ကြောင့် ကျွနှုပ်တို့၏ နိုင်ငံသားခံယူချက်နှင့် ရပ်တည် ချက်တို့မှာမှန်ကန် တိကျ ပြတ်သားရန် လိုအပ်လှပါသည်။ ကျွနှုပ်တို့သည် ပန်းသေးများဖြစ်- တရုတ်ပြည် ပြန်ရန်လည်း အကြောင်းမရှိသလို ကုလားဟု အခေါ်ခံရ သဖြင့် ကုလားပြည် ပြန်ရန်လည်း အကြောင်း မရှိပေ။ ထို့ ကြောင့် ကျွနှုပ်တို့ နိုင်ငံ သည်မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချစ်မြတ်နိုး ရန်နှင့် သစ်စာရှိရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ ၄င်းပြင် အခြားသော တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားများနှင့် အေးအတူ ပူအမျှ ချစ်ချစ်ခင်ခင် အေးအေးချမ်းချမ်းသေတပန် သက်တစ်ဆုံး အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်သွားကြရန် အထူးအရေးကြီး လှပါသည်။
ကျွနှုပ်တို့သည် မြန်မာ ပြည်၏ တိုင်းရင်းသား / နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက် ခံယူကြရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွနှုပ်တို့သည်အခြား အခြားသော မြန်မာ တိုင်းရင်းသား / နိုင်ငံသား များ နည်းတူမြန်မာနိုင်ငံသို့ ရှေးနှစ် ပေါင်း ရာ နှင့် ထောင် နှင့် ချီ – အတည်တကျနေထိုင်လာကြသော မျိူးနွယ် များမှ ဆင်သက် လာသည့် အဆက်အနွယ်များဖြစ်ကြပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံ တော်၏ ၁၉၄၈ ခုနစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအက်ဥပဒေ အပိုဒ် -၃ (၁၁) အရ ပုဂိုလ် တစ်ဦး၏ အမိ အဖ နှစ်ဦး စလုံးသညတိုင်းရင်းသား / နိုင်ငံသား များဖြစ်ကြလျှင် အဆိုပ် ပုဂိုလိ သည် နိုင်ငံသား လက်မှတ် လျှောက်ထား ရန် မလို ၊အလိုအလျှောက် နိုင်ငံသားဖြစ်သည်။
-ဤ နေရာတွင် အထူးသတိ ပြုရန် အချက်မှာ
တိုင်းရင်းသား / နိုင်ငံသား ဆိုရာတွင် ချင်း- ကချင်- ရှမ်း – ကရင်- မွန်-ကယား – ရခိုင်- ဗမာ တို့ နှင့် ၁၈၂၄ ခုနစ် မတိုင်မီက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ လူမျိူးအစုလိုက် ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသူများကို ဆိုလိုပါသည်။
တဖန် ၁၉၄၈ ခုနစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁ (ခ)အရ ပုဂိုလ် တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ အမိအဖ နှစ်ဘက် ရှိ အမိဘက်မှ အဖိုးအဖွါး – အဖဘက်မှ အဖိုးအဖွါး ၄ ဦး အနက် အနည်းဆုံး တစ်ဦး သည် တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူ ဖြစ်ပါက အဆုပါ ပုဂိုလ် သည် အလိုအလျှောက် နိုင်ငံ သား ဖြစ်
တဖန် ၁၉၄၈ ခုနစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ သားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ – ၄(၂) အရ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အမိအဖ နှစ်ဘက် ရှိ အမိဘက်မှ အဖိုးအဖွါး- အဖ ဘက်မှ အဖိုးအဖွါး ၄ ဦး စလုံးသည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်းအခြေ စိုက် နေထိုင်ခဲ့ကြ – ၄င်း၏အမိအဖ နှစ်ဦးစလုံးသည် နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် ခံယူ ထား ကြသော်လည်း ထိုကလေး ကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း-မွေးဖွါးခဲ့ လျှင် အဆုပါ ပုဂိုလ် သည် အလိုအလျှောက် နိုင်ငံ သား ဖြစ်ပါသည်။အထက်ပါ အက်ဥပဒေ များအရ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ပန်းသေးမျးအားလုံးတို့သည် တိုင်းရင်း သား နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြသည်မှာယုံမြှးသံသယ ဖြစ်ဖွယ် အကြောင်း လုံဝ မရှိပေ။ ထိုအချက်အလက်များ ကိုကျွနှုပ် တို့ တစ်တွ သည် ကောင်းစွာ နားလည် သဘော ပေါက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမြို့နယ် အနှံ့ အပြား ရှိ ပန်းသေးထု အားလုံးကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်းရှင်းလင်း အသိ ပေးရန် တာဝန်ရှိ့ပါပေသည်။ ကျွနှုပ် တို့၏ နောင်လာနောက်သားများကိုလည်း ကြည် လင်ပြတ် သားသော ထိုခံယူချက် အမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ခံယူ ထိန်းသိမ်း သွားကြရန် လှုံ့ဆော်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွှေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း။ယနေ့ ပညာတတ် ပန်းသေးလူငယ်များသည် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ်များကို စိတ်ပါဝင် စားစွာ လေ့လာ ရှာဖွေ စုဆောင်း ထိန်းသိမ်း သွားကြရန်အမျိူးသားရေးတာဝန် တစ်ရပ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သွားကြရပေမည်။ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေး မှု အမွေ အနှစ် ဆိုသည်မြှာများစွာ ကျယ်ပြန့် လှပါသည်။အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့အားဖြင့် ခက်ခဲ နက်နဲ လှပါသည်။ နှစ်ရှည် လများငွေ ကုန် လူပန်း ခံပြီး လုပ်ရမည့် အလုပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦး တစ်ယောက် တည်းဆောင်ရွက် – မရပါ။ ညီညီ ညွတ်ညွတ် တတ်ညီ လက်ညီ ဖြင့်အများ စုပေါင်း လုပ်ဆောင်မှ အောင်မြင် ပါမည်။ တစ်ခုသတိပြု၇မည်မှာ ”အမှန်တကယ် လုပ်လျှင် အမှန်တကယ် အောင်မြင် ရမည်” ဆောင်ပုဒ် ကိုနှလုံးသွင်းထား ရမည်မှာ အဓိက အချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ပန်းသေးအထောက်အထား စာအုပ်၊စာရွက်၊စာတမ်း များ ၊ ဓါတ်ပုံပန်းချီကားချပ်များ ၊ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် သုံစွဲခဲ့သည့် ငွေ များ၊ အ၀တ်အထည်များနှင့် လူ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များကို ရှာဖွေ စုဆောင်းရမည့် အပြင်”သက်ကြီးစကား၊ သက်ငယ်ကြား” ဆိုသကဲ့သို့ ယနေ့တိုင် သက်ရှိ ထင်ရှားရှိနေသေးသော သက်ကြီး ရွယ် အို ပန်းသေး ဖိုးဖိူး ၊ ဖွါးဖွါး များထံချဉ်းကပ်ပြီး မိမိတို့ သိလို တတ်လို ရာများကို စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးမှတ် တမ်း တင်ထား ရန် အထူး လိုအပ်လှပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ပန်းသေးလူမျိူးများအများအပြား နေထိုင် ရာဒေသများ ရှိသမိုင်းဝင် အဆောက်အဦးများ ကို အခြေ အနေ နှင့် အချိန်အခါ ပေးလျှင်ပေးသလို လူကိုယ်တိုင်သွားရောက် – ဖြစ်စေ၊ ဆွေ မျိူး များ (သို့မဟုတ်)အသိမိတ်ဆွေ အဆက်အသွယ် ရှိ ပုဂိုလ်များ မှတဆင့် ဖြစ်စေပန်းသေးလူမျိူးမျာနှင့် သက်ဆိုင်သော အဆောက်အဦးများ၏ ဓါတ်ပုံများ ၊နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းများကို ရှာဖွေ စုဆောင်းရန် အထူး အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ မန လေးမြို့ ရှိ ပန်းသေးဗလီ ၀င်းကြီး နှင့်ပန်းသေးဗလီကြီး ၊ မိုးကုတ်မြို့နှင့် ဝကပါပြင် မြို့များ ပန်းသေးဗလီကြီးများနှင့် စာသင်ကျောင်းများ၊ လားရှိုး ရန်ကုန် နှင် အခြား မြို့ များ ရှိပန်း သေး ဗလီကြီး များနှင့် စာသင်ကျောင်းများ၊၊ မြန်မာပြည်သို့ အကြောင်းအမျိူးမျိူး ဖြင့် လာရောက်ပြီး မြန်မာပြည် တွင်ပင်ကွယ်လွန်သွားကြသော ပန်းသေးစစ်ဗိုလ်ချူပ်ကြီး များ၊ သံသမနကြီ်းများ ၊နာမည်ကြီး ကုန်သည် သူဌေး သူကြွယ်များ၊ ဘာသာရေးေ၇ှ့ဆောင်ဆရာတော်ကြီးများ၊ စာပေပညာရှင်ကြီးများ၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် သမိုင်း မှတ်တမ်း မှတ်ရာများနှင့်ကဘရ် သချိူင်း များကို စုံစမ်းလေ့လာဖေါ် ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောင် လာလ တံ့သော ပန်းသေးလူငယ် မျိူးဆက်သစ်များအတွက် ကိုယ့် လူမျိူး ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထား ဂုဏ်ယူပြီး မျိူးချစ်စိတ်ဓါတ် ရှင်သန်စေရန် ခိုင်မာသောအထောက် အထားဖြင့် စုဆောင်းထား ရှိ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ရပါမည်။
Panthay (Burmese Chinese Muslim) Mosque, Mandalay, Burma
(1) မန္တလေးမြို့ ပန်းသေးဗလီကြီး ၏ နှစ်တစ်ရာပြည့် အထိန်းအမှတ် အဖြစ်ဂုဏ်ပြုတင်ဆက်သူ မိုးကုတ်မြို့မှ အငြိမ်းစား ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဟာဂျီဦးရီစွတ် ခေါ် ဟာဂျီ ဦးဘရီ ၏ ပန်းသေး အမျိူးသားသမိုင်း အကျဉ်း ချူပ်စာအုပ်။
(2) အစ္စလ္လာမ့် စာစောင်
(3) ဗမာ မူဆလင် စာစောင်အတြွ(၁) အမှတ်(၂)စာမျက်နှာ(၅၆)- ၁၉၆၂ ခု။
(8) မြန်မာ စာညွှန်းပေါင်းကျမ်း
(9)မြန်မာ့သမိုင်း (ဆရာ ဦးအေးမောင်)
(10) မြန်မာ ရာဇ၀င် သိမှတ်ဖွယ်ရာ အဖြာဖြာ(ဦးကြည်)
(11)ဗမာ-မူဆလင် ရာဇ၀င် (ဦးမြ-၁)
(12) ဗမာ-မူဆလင်သမိုင်း(ရွှေဘို ဦးမြဦး)
(13) နိဗါန်ဆော် စာစောင် အမှတ်-၂ – စာမျက်နှာ၂၄ နှင့် ၄၆။
(14) အရှေ့ဖျားတိုင်းပြည်များသမိုင် အကျဉ်းချူပ်။
(15) ပါမောက္ခ ဦးဘညွှန့်= ပါမောက္ခ ဦးလူဖေ၀င်း
(17)ရုပ်စုံ- စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ- ၅ – စာမျက်နှာ ၂၄ – ၄၄ ။
18. Comming of Islam to Burma down to1700 A.D (Gohmu Ba Shin ).
19. M uslim HLRALD (HONG KONG) – 1964 to 1084 Issued.
20. Chinese Muslin in Burma (Muslin in Burma puplishers house, Rangoon).
21. Islam in china (B.N.A BABBAN)
22. History of Burma (G.E. HARVEY)
23. Burma past and present. (Peneral Albert Fytch). Pg 96:97:98;113;302.
24. Dr. Thaung “Panthay Interlude In Yunan “ Pg 474;478: 480.
25. Dr. Anderson. “Panthay in Burma.” Pg 94:220: 225:227:229:233:241:246).
26. “Puthi and Panthay “ by bobson-Jobson . Pg 669.
27. “History of Burma“ bySir Arthur Phayre.
28. “Burma from then earliest times to the presrnt “ ( J.G. SCOTT) Pg 609.
29. “The River of Golden sand “ By Capt: Willion Gill. 1883: Pg 251.
30. Panthay (ပန်းသေးမွတ်ဆလင်)သမိုင်း
Forward mail: Khin May Htwe, Kothaung township.
This entry was posted in Articles, History, Panthay, Photos. Bookmark the permalink.
← The Best Doccuments of Rohingyas in Burma, အကောင်းဆုံးရိုဟင်ဂျာ အထောက်အထားများ : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)
ဂျဟန္နမ် ငရဲ →